Guddoomiyihi hore gobalka Hiraan Yuusuf Dabageed oo edeyey Madaxweyne Waare – Radio Daljir
Guddoomiyihi hore gobalka Hiraan Yuusuf Dabageed oo edeyey Madaxweyne Waare
Juunyo 7, 2019 6:22 g 0
Guddoomiyaha maamulka gobollka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta maamulka gobolka ayaa eedeyn kulul u jeediyay ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha dowlad gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Yuusuf Daba-geed ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle isku qabteen sida uu hadalka u dhigay dhaqaalaha ka soo xarooda gobolka oo uu madaxweynuhu doonayo ayuu yiri in Account isaga u gaar ah lagu shubo.
‘’Annaga iyo madaxweynaha waxaa isku qabanay dhaqaalaha ka soo xarooda gobolka Hiiraan waa in Jowhar loo gudbiyo oo Account isaga u gaar ah lagu shubo, islamarkaana uu qorto shaqaale maaliyadadeed oo isaga u shaqeeya oo aan gobolka wax shaqo ah u qaban, waxaan u sheegay madaxweynaha sidaa in wax soconaya aheyn, loona baahan yahay in lacagta gobolka ka soo xaroota la og yahay halka ay marto iyo waxa bulshada laga qaaday loogu qabayo’’ ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Wuxuu sheegay in go’aankan uu qaatay uusan aheyn sida uu hadalka u dhigay mid isaga u gaar ah, laakiin ay ku mideysan yihiin guud ahaanba qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan.
Kenya oo Maxkamad soo tagtay Aqoonyahan Bursaliid & dhalinyaro kale (Daawo)